သတင်း - ဂျင်ချိ UNITE ကို ပုံ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Q:ဘယ်လိုလဲ အကြောင်း က မှို ကုန်ကျစရိတ် in JCU ဖိအား?
A:ငါတို့ ရှိသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကိုးကား အင်ဂျင်နီယာများ ရန် အကဲဖြတ် က ကုန်ကျစရိတ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်, ငါတို့ မှို ကုန်ကျစရိတ် ဟုတ်တယ် အလွန် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း နှိုင်းယှဉ် က အတူတူ စက်မှုလုပ်ငန်း မျဉ်းကြောင်း စီးပွားရေး။ သာ တစ်ခု စုံစမ်းရေး မင်း အလိုတော် ရှာ အပြင်ထွက် က အမှန်တရား
Q:Are အဲဒီမှာ ကန့်သတ်ချက်များ ရန် JCU မှို ဆေးထိုး မှို ဖြစ်စဉ်များ?
A:ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်, နံပါတ် ငါတို့ လုပ်ဆောင်နေသည် ဟုတ်တယ် ပြေး ရန် ရန်tal အလေးချိန် 10 ရန်ns မှို နှင့်အတူ2မီတာ အရှည်ကြီး နှင့် မြင့်သည် precဟုတ်တယ်ion မှို ဖြစ်ကြသည် က အရေးကြီးတယ် အစိတ်အပိုင်းများ ၏ ငါတို့ ဝန်ဆောင်မှုများ။
Q:ဘယ်လိုလဲ မကြာမီ လုပ်နိုင် ငါ ရပါတယ် ငါ့ ကိုးကား နောက်ကျောလား
A:မင်း အလိုတော် ရပါတယ် က ကိုးကား အတွင်း2အလုပ် ရက်ပေါင်း။ The ကိုးကား ဟုတ်တယ် တရားဝင်သည် ဘို့ 30 ရက်ပေါင်း။ The ကိုးကား အလိုတော် ပါဝင်သည် မှတ်ချက်များ အကယ် မဆို ရှုထောင့် ၏ က မော်ဒယ် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး သင့်လျော်သော ဘို့ ဆေးထိုး ပုံသွန်း။
Q:ဘာလဲ က ပြုပြင်မွမ်းမံ ကုန်ကျစရိတ် တခါ T1 ပျက်ကွက်လား
A:ယေဘူယျအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင်, တခါ T1 ပြေးပါ ငါတို့â€™ ll ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ T1 အားလုံး ပြနာများ။ အကယ်၍ ငါတို့ လုပ်တယ် အမှားများ မှာ မှို ချမှတ်ခြင်း, JCU အလိုတော် ဝက်ဝံ က modအကယ်icမှာion ကုန်ကျစရိတ်။ ဒါပေမယ့် အကယ် ဖောက်သည် လိုအပ်ချက်များ ရန် ပြောင်းလဲမှု ဒီဇိုင်း နှင့် လိုအပ်တယ် modအကယ်y မှို, ဖောက်သည် အလိုတော် ဝက်ဝံ က ကုန်ကျစရိတ်။
Q:ဘာ အမျိုးအစား ၏ CAD ဖိုင်များ လုပ်တယ် မင်း လက်ခံပါသလား
A:အဘို့ ကိုးကား, ငါတို့ လုပ်နိုင် လက်ခံသည် ပုံဆွဲ, မော်ဒယ်များ ဒါမှမဟုတ် ပုံဆွဲ ပုံများ ဖန်တီး in မဆို စီးပွားဖြစ် အစီအစဉ်။ အဘို့ မှို ဒီဇိုင်း, ငါတို့ လက်ခံသည် မော်ဒယ်များ ဖန်တီး က မဆို စီးပွားဖြစ် CAD အစီအစဉ် သော ဟုတ်တယ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ in က wဒါမှမဟုတ်ld. အသေးစိတ် အဖြစ် ဖို 2D ဖိုင် fဒါမှမဟုတ်mat: DXF, DWG, PDF 3D ဖိုင် fဒါမှမဟုတ်mat:PRT,STP,IGS
Q:လုပ်ပါ မင်း ကိုင်တွယ် ထုတ်လုပ်မှု ဝန်ဆောင်မှု နောက်မှ မှို လုပ်ခဲ့လား
A:ဟုတ်တယ်။ ငါတို့ ဘက်ပေါင်းစုံ ဝန်ဆောင်မှုများ အဖုံး ဆေးထိုး ပုံသွန်း ဝန်ဆောင်မှု, ထပ်တလဲလဲ အမှာစာများ၊ မြင့်သည် အသံအတိုးအကျယ် ထုတ်လုပ်မှု, စာချုပ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ပရိသ ဒါမှမဟုတ် sub-ပရိသ ဝန်ဆောင်မှုများ.